DAAWO-Madaxweynaha Puntland oo afka furtay kana hadlay shirkii fashilmay, qorshohooda & arrimo kale.
April 7, 2021 Xuseen 25
Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa faah-faahin ka bixiyey shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee magaalada Muqdisho oo natiijo la’aan kusoo idlaaday, kadib markii wasiirka warfaafinta Soomaaliya ku eedeeyey madaxda Jubaland iyo Puntland, oo uu sheegay “inaysan rabin” in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in qoraalka iyo muuqaalka dowladda sii deysay uu ahaa wax horay u diyaarsanaa, isagoo tilmaamay inay cadahay in dowladda aysan rabin shirka looga hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa.
Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in wixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo warsaxaafadeedkii uu sii daayey wasiir Dubbe ay yihiin tusaalaha in la doonaayo in la afduubto doorashada.
“Waxaa layaab leh maanta oo dhan waa shireynay, dhowr maalmood ka horna waa shireynay waxaase cadaatay qoraalka iyo muuqaalka ay sii deysay dowladda uu ahaa mid horay u diyaarsanaa, Wasiirka maanta hadlay dabcan wuu nala joogay maanta dharka uu watay iyo kii codka ku qabtay kii uu watay maaha, wax sii diyaarsanaa oo loogu tala galay in ummadda Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo, mas’uuliyadeeda cida howshaas qabatay ayaa qaadi doonta”ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Kkkkkk muxuu yiri wax aan diidnay malahan kuye kkkk muuqaalkan horey ayuu udiyaar sanaa kuye kkkk maant oo dhan dubbe wuu nala joogay dharkaana muu wadan kuye kkkk WAAN LA YAABAY ODEYGA MAXAA KA KEENAY HADALKAN MA WUXUU KA NAXAY OO UU KA SASAY MARKII LA YIRI DENI IYO MADOOBE AYAA DIIDAN HESHIISKII 17 SEPTEMBER TAAS OO MACNAHEEDA AH QASWADAAYA DOORASHADII LAGU HESHIIYAY DIIDAN HALA XIRO . KKKĶKKK EE SHAXDAAN WAXAA LA YIRAAHDAA (LABO KUU DARAN MID DOORO) IN AAN DOORASHO DHICIN OO FARMAAJO SII JOOGO XUKUNKA AMA DOORASHO DHACDO UU ISAGA FARMAAJO KU SOO LAABTO XUKUNKA , KKKKK EE SHAXDAN MA AHAN TII AABE SIYAAD EE WAA TII 21s century kkkkkkkkkkkk Puntland haa noolato somali weyn hanoolato
inan gumeed garac ah baa tahay ee dhig magaca puntland
puntlander ma tihid, wacal baad tahay, anniga ayaa og
Hadii shirkii fashilmay wali
Rajadii madhamsn laakiin
Dani iqyaar mahan nin
Uqalma masiirka puntland
Na mahan dhibka uu ugaystay
Sharafkii puntland ayaan
Aad ogaxumahay siyaasi xataa
Mahan 3 maamul gobaled iyo
Banaadir iyo dowladii fadaralka iyo xaataa 89%
Jubaland ayaa isracsan
Xataa waxaa uu garan wayay
Xaqii puntland raadi I’m very sorry laakiin farmajo karabnaa inuu badbadiyo
maxamed cali, dacartii aad cuni jirtay baa ku huran, dani iyo aabayahaashii awoowayaashii, waligood shaatigoodu waa cadaa, anaga qoor qoor iyo guudlaawi , hanooga dhigin dad, kuwaasi dameeraha baa ka caqli roon,
JUGSOO DHACAY Inan gumeed waa adiga iyo dameerka xalane ku xiran aad daba joogto kkkkkkk
Ninkii garan waayaa danta Puntland ma waxuu noo sheegayaa danta somali weyn hashaa lilaah .
Kalmadda Afkuu furtay waa gef aan ku haboonayn qof aan caaytamin in loo addegsado. Website qolyaha ama leh ama qora haka fiirsadaan hadalda afxumada ah ee ay adeegsanayaan.
Af kuu furtay sidee u taqaan nin dubbe lala dhacay oo aan afka furan 🥵 miyaa jira ? Kkkkk
Magaca aad wadata haddaan run kaa ahayn ee aad isku qarinayso waa nifaaq ee iska ilaali dambiga. Midda kale Afkuu furtay waa qof caytamaya oo xishoodkii ka tagay oo afkiisa waxii ku soo dhaco yiraahda. Adiga halkaad ka timid malaha waxaa loo yaqaan afkuu kala qaaday.
Awalba, daar duntay baa la iskudayayay in dhismaheeda saqafka sare dib loogasoo billaabo, natiijaduna way iska caddayd runtii.
Haata iyo dan: qaranka dib-udhiskiisa gundhigga halagasoo billaabo oo Xamar halagu kaladareero inta dowrkeeda la gaari doono. Jagada madaxweyne in muddo ah ha la iska laalo oo xukuumad kumeelgaar ah ra’iisalwasaaraha hadda jooga dalka hakusiisimo. Baarlamaanka aqalkiisa hoose isagana hala kaladiro oo kan sare halareebo si uu xukuumadda talada dalka uladaaddeheeyo muddadaas cayiman.
Muddadaas iyada ah (2 sano kufilan qiyaastayda), Farmaajo aayarkiisa meesha ha isagahuleelo oo dalka burbur horleh hakabedbaadiyo waayo sidaas ayay isaguba sumcaddu uugujirtaa. Kadibna, maamullada xoogga halagusaaro sidii ay hannaanka dawlad-wanaagga udhaqangelin lahaayeen – min doorasho diinta iyo dhaqankeena waafaqsan ilaa dhammeystirka dastuurka iyo hay’adaha iyo huwaabaha dawliga ee kaqabyada ah.
Ugu dambeynna, ciidamadan dalka lootababaray oo kuwa AMISOM kaashanaya muddadaas iyada ah xooggooda hasaareen sidii ay koonfurta uga saffeyn lahaayeen kooxaha argaggixisada. Tababar dheeri ah ayayna usiinoqon lahayd xaqiiqdii. Meeshan waxa is-haya waa nin iyo nidaam ee ma aha rag dhaxal uu aabbahood kagatagay iskuhaysta oo iskuna xagxaganaya.
Wax walba oo ladhisayo nidaam loomaro ayuu leeyahay ee iskadhis un ma aha xaajadu!
Dani waa masuul sare oo Illah hibo u siiyay hogaamin iyo xigmad, balse waxaa Alle wax ugu daray nin dhimirka ka xanuunsan oo qalbi xab xab ah iskuna kalsoonayn go aana aan gaari karin, ini Farmaajo waa shaqsi aan rag dood iyo hadal adag la geli karin tayiiso iyo karti uu ku hadlana lahayn in loo hadlo ama laysaga sacbiyo mooyee. Waxay ahayd nasiibdaro wayn in shaqsi caynaas ahi uu dalkan hogaan ka soo noqday. Waxa mesha ka dhacay maanta awalba waa la ogaa inan kooxda villa wardhiigley ee fahad yaasiin maamulaa sysan daacad ka ahayni horay u docdo wayse cadaatay maanta. Ini fargaajo isagoo foolxun oo bahdilin ayuu baxayaa maalmaha soo socda.
Kan la baxay PUNTLANDER anaa garanaya waa waca waagii u yaraana 2 nin baa fara xumeyey ka dib Xamar baa loo qaaday, raggii fara ximeeye oo caabudwaaq ka yimid ayaa sirtiisa haya waxaad ku garan kartaa nacaybka iyo cayda
Binti girl, ma Dube ayaa ka caraysiiyay ?.. naa maxaad ka carootay . noo sheeg
Waxaan u jedaa kuwo badan oo wada inangumeed inangumeed ah oo canaasiirta Daarood yar yaraha ah ee gunta majeerteen ku hoos nool ah hadana u qooqaya dhimirlaawe ini Farmaajaha fashilka ah ee villa wardhiigley iskusoo xiray markii xilkii ka dhamaaday. Waxaa oranlahaa canaasiirtaan gunta ah ee Daarood yar yaraha jifaajiriqda ah iska caytama idinku cod malihidin waxna laydin waydiinmaayo aabayaashiina wax lama waydiin jirin,Madaxwayne Dani ayaad ku qowracantihiin go aankiisa ama dhuusa ama habaartama your absolutely nothing. Ini Farmaajo waa lasoo afjaray diyaaradii 2016 xamar keentay ayuu dib ugu noqon isagoo dulaysan , bahdilin oo foolxun idinkana kii hooyadiin guursadaa waa Adeer kiin wax tihiin is ogaada aabayaashiin Dani aabihiis kama dhinac hadli jirin ee xoolahay u raaci jireene iska dhiga kabaha waa wayn ee ini Farmaajo idiin galiyay. Waxaan la hadlayaa ALL canaasiirta halkan ka yuu yuu leh sidii mukulaalihii
Pinti Girl… wali may xanaaqin. niiko & kacsi badan ayay wadaa.
Ini Farmaajo waa mahadsanyahay hadaan reer Puntland nahay wuxuu na baray oo na tusay canaasiirt badan oo nagu hoos nool kuna barbaaray barwaaqo iyo nolol aan ciyaar ku iman balse qori caaradii iyo dhiig lagu keenay, canaasiirta Puntland ku hoos nooli waligood wiil ugama dhiman halgankii dheeraa ee Puntland ku timid waxna kuma darsan haba yaraatee bal wayba xagal daacin jireen. Waxaa cajiib ah canaasiirtaasi inay ku daaca wurmen barwaaqada iyo amniga Puntland ee maalin walba ay wiilal badani ku nafwaayayaan. Canaasiirta ini Farmaajo wada caashaqsan ee wada jidbaysani maxay u tari karaan ini Fargaajo ileen waa duqsi ururaye.somalidu waxay dhahdaa laako sagaaro raqbay istaraan Farmaajo isagaa inangumeed homless ah mid kaloo homless ahi muxuu u tarin ileen labo qaawani is ma qaadee. Canaasiirta waxaa kamid ah qaar dhulkoodii la haysto oo hooyadiis iyo walaashiis wiilal meelo kale ka yimi ay faraxumayn ku hayaan habeen iyo maalin oo sharaf iyo karaamo beelay oo gun ah hadana ini Fargaajaha dhimirka la wada caashaqsan. Waxaan u sheegayaa canaasiirtaas Puntland iyadaa siyaasada soomaliya hogaaminteeda leh shalay markii ini Farmaajo adeerkiis ardaalkii afwayne dalkan burburiyay Puntland ayaa soo celisay dowladnimada sidaa daraadeed dowladnimada soomaliya waa Puntland ee idinka shaqadiinu waa inaad sacbisaan oo gaardisaan waayo boos idiinkama banaana miiska wax lagu qaybsado.
Ma shirkii KOONFURTA Jamhuuriyaddii Soomaaliyaa lagu kala kacay?!\_
Waxa aan marka hore caddaynayaa in maamuklkayga SSC & kan Hargaysa (ee WAQKHOOYIGA Jamhuuriyaddii Soomaaliya) toona uuna miiska fadhiyin oo aysan wax metelaad ah ku lahayn. Sidaa daraadeera, waxa meesha BEENTA isula horfadhiyey waa maamullada kadhisan KOONFURTA Soomaaliya & kooxda villada.
Xaq iyo gar baan u leeyahay inaan sidaa u hadlo, waayo Farmaajo waxa uu kal hore si cad u sheegay in uusan aqoonsanayn maamulka SSC; sidaa daraadeedna, uusan ka jawaabi karin su’aalaha ku saabsan mandqaddaas. Madaxweynihii ka horreeyey ee Xasanna waxa uu maamulkii KHAATUMO si toos ah uga reebay maamulladii uu dhisayey, isaga oo si badheedh ah u yiri, “federaalku waa KOONFURTA Jamhuuriyaddii Soomaaliya uun, maamulka ugu danbeeyana waa HIRSHABEELE!”
Aniga oo marka sababahaas kore ka duulaya, ii ogolaada in aan fekerkayga u dhiibto sidii qof AJANABI ah, oo aan ka tirsanayn Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Haddaba, shirka fashilaaddiisa waxaa iska leh DAWLADAHA Puntland & Jubaland! Waayo wax aan meesha ku jirin bay soo galinayeen. Sideedana haddii arrin lagu heshiin waayo, kooxbaa wax aan meesha kujirin soo galinaysa ama kooxbaa wax meesha ku jira ka saaraysa.
Haddaan faahfaahiyo, heshiis baa la gaaray 17 September. Heshiiskaas dhinacyada gaaray waxa uu ku cad yahay isaga laftigiisa; maamuladda KOONFURTA & MADAXTOOYADOODA. Heshiiskaas waxa ka soo noqday 3 arrimood, oo saddexdii arrimoodna guddi farsamaa Baydhaba loogu saaray. Guddigiina waxa ay sameeyeen soojeedimo ku nsaabsan xal u helida 3dii arrimood ee heshiiska ka soo noqday.
Marka ay giraantu halkaa botorinayday, waxaa shirka afisyooni ahaa in wax laga yiraahdo SOOJEEDIMIHII guddigii farsamada deedna la saxeexo oo doorasho sidaa lagu aado. Haddaba waxaa imminka muuqata in kooxda bedbaado kharan la baxday, ee Deni & Madoobe ay ka midyihiin, ay soo gelinayaan meesha arrin aanan ku jirin heshiiskii 17 Septemer & kii Baydhaba ee 6dii Febraayo.
Gunaanadkii, khaladka & gardarrada waxaa iska leh nimanka hogaamiya maamullada Garoowe & Kismaanyo, oo meesha keenay wax aan heshiiskii ku jirin si ay maslaxad ugu raadiyaan isbahaysigooda cusub ee la baxay BEDBAADO QARAN. Arrinkii waxa ay ka dhigeen ILA MEERAYSADII la sheegi jidhay.
Sidaa daraadeed, xalku waxa weeye in sida ugu dhakhsiyaha badan arrinkan loogu celiyaa golaha GACANTAAGGA, maaddaama lagu heshiin waayey heshiiskii ay iyagu ansixiyeen, si ay go’aan uga gaaraan halka laga aadayo. Waa arragtida shakhsi Soomaaliyeed oo laga saaray jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo hadda u muuqata in ay ku soo uruurtay Garoowe illaa iyo Dhoobley, oo iyagiina isla liita haddaan alle ur u bixin.
@ Mubarak Yusus, hooyada ayaan anshax iyo edeb ku barin oo naag xun oo qarmuun ahayd ee Puntland afka uraya kala bax inangumeed yahow inangumeed ku dhalay homless ka ahi
Kkkk dad waxaa ugu liita ninkii u hiiliya oo u aakhira seega nin siyaasi ah oo aan ogayn una baahnayn. Malahayga soomaali waxa ugu caqli liita nimankan ninba nin caynayo si u difaaco siyaasi reerkooda ah ama u dhaleeceeyo siyaasi reera kale ah. Waar ordoo alle u noqda oo aakhiradiina ilaashada oo is cafiya kuwaad u kala hiilinaysaan waxba idiin qaban maayaan aakhiro iyo adduunka midna.
Waxaas baa maanta soomaali taladeeda raba in ay dhigaan sida magacyadooda oo kale.
Dadka noocaas wax kasta oo wanaag ah oo aad u qortid ma fahmi karaan,
Sidaas daraadeed waxa kaliya oo aan u sheegeyna waa in aan magacooda xasuusina.
“Nin aan talin jirin haddii uu taliyo waxaa taga nin aan tagi jirin”
Dadka hadda talada isku dhajinaya waa dad aan horey u soo talin jirin,
Wax kasta waxay u baahan yihiin khibrad iyo waayo aragnimo,
Ka ambo-qaadashada dhawanka suuban ee Islaamka, tarbiyada wanaagsan,
Ka tusaale qaadashada hogaamiyaashi hore ee halyeeyada Islamka sida Cumar binu khadaab iyo kuwa la midka ah.
Qof lagu soo ababiyay cuqdad iyo naceyb haddi uu talada gacanta ku dhigo wuxuu hawsha ka bilaabaya aarsi, xin iyo jeeb-buuxsad,
Ku noocaas ahna ummad ma gaarsiinjaraan horumar
Wali riwaadii ma dhamaan mana dhawa, Ismaqiiq farmaajo iyo kooxdiisa oo lugo aan ku taaneyn ayaa hadashey. Ragii sheekada wadey wali ma hadlin. Puntland iyo Jubbaland waxey cadeeyeen in dhankooda uu shirkii uusan bilaamin. Harkii ayaa NAL CAD lagu shidey Ismaqiiqe farmaajo oo lagu yaqaan inuu cararo shirarka markuu arko the ney ku foorarto.
Haddii waxaa war Laga si gayaa BEESHA XALANE. Haddii xal lawayo Puntland iyo Jubbaland waa fassxanyihiin. ً
Wixii intaa ka dambeeya waa HAWIYE Vs Ismaqiiqe farmaajo iyo qowleysayada uu wato.
NASASHO AYAAN AADNEY KUYE Callaacal looma baahna zanzibarkii tolka sheegtayow deni ee wax diid ama waxaad saxiixday ogolaw sirraq ayaad ku jir TAA KKKKJJJ
HILLAAC wuxuu illabaay in wakhtiga uu ka hadlayo Farmaajo haystay Mandate, maanta oo April 2021, wax mandate ah ma haysto waa taa waxa isbedelay
Guudoow, marka hore khalad hayga fahmin; anigu taageere uma ihi Farmaajo & kooxda villada, ee waxa kaliya oo aan si XOR ah u cabbirayey fikirkayga. Midda labaad, haddii sida aad ka dhawaajiday uusan Farmaajo hadda mandate haysan (oo ah doodda ay khabaan kudladda la baxday BEDBAADO KHARAN ee Deni & Madoobe ay darka u fadhiyeen) dee way fududahay walaal. Taasi micnaheedu waxa weeye, heshiiskii 17 September ee doorashada dadban isna waanu diidnay oo wakhtiga lama jaanqaadayo ee dib halloogu noqdo. Waxaa marka taas ka dhalanaysa in arrinka dib loogu celiyo golaha SHACABKA/GACANTAAGGA!
Haddaba, marka aad fiiriso halka heer kulku gaaray, waxaa kooxda villada ee uu Farmaajo hogaamiyo looga fadhiyaa in ay qaataan go’aan aan libiqsi lahayn. Waa in ay sidii dawlad u dhaqmaan oo arrinka haragiisii iyo baarlamaanka ku celiyaan, AMA waa in ay aqbalaan in BEESHA LIXAAD meesha buuxiso oo iyadu baarlamaan ka noqoto oo ay si toos ah miiska u soo fariistaan. Dagaal SHAANSHIYEED danbe iyo shaashadaha oo la isaga tiriyaa maharin baan filahayaa.
GUNAANADKII, saddex arrimood baa kooxda villada u taalla maaddaama ay madaxtooyadii fadhiyaan. Waa tan koowaade, waa in ay arrinka ku celiyaan baarlamaanka maaddaama dhinacyadu heshiin waayeen sida ay hadalka u dhigeen. Waa tan labaade, waa in ay si duuduub ah ku aqbalaan dhammaan shuruudaha ay soo jeediyeen MADASHA BEDBAADO KHARAN. Waa tan ugu danbayda e, waa in ay arrinka ku wareejiyaan BEESHA LIXAAD. Waa aragtida MADAXWEYNAHA maamulka SSC, ee loo diiday ka mid noqoshada federaalka.